Musharax Prof: Cali Maxamad Geedi oo dhawaan soo gaaraaya Magaalada Muqdisho. Soomaalinews.com 11 Aug 12, 14:44
Cali Maxamed Geeddi Ra�iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ka mid ah Musharixiinta u taagan Jagada Madaxweyninimada Soomaaliya ayaa sheegey inuu dhawaan soo gaarayo Magaalada Muqdisho.
Mushraxan Cali Maxamed Geeddi ayaa sheegey inuu diyaar u yahay in jagadaas u tartamo isagoona ballan qaaday haddii xilkaas ku guulaysto inuu Dalka wax badan ka qabanayo.
Arrimaha uu sida gaarka ah farta ugu fiiqay Mr Geeddi ayaa waxaa ka mid ah sugidda amaanka iyo soo Celinta Xasiloonidii Dalka ka jirtay Bur Burkii ka hor Ra�iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geeddi ayaa kalsooni buuxda ka muujiyay inuu ku Guulasyanayo Xilkaas isagoona u ballan qaaday Shacabka Soomaaliyeed in is bedddel la taaban karo uu u horseedayo.
Mr Geeddi ayaa ra�iisul Wasaare ka ahaa Xukuumaddii Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo khilaaf ba�an oo soo kala dhex galay Sababay in Xilkaas isaga Tanasulo ka gadaal cadaadis fara badan oo uga yimid Dhinaca Beesha caalamka.
Mr Geedi Xukuumaddiisa ayaa inta badan lagu eedeynayay Musuq maasuq baahsan iyo wax ka qabasha la�aan wadcigii uu dalku xiligaa marayay taasoo keentay in ay iska hor yimaadaan isaga Mdaxweynihii xiligaas Yuuf.
Hadalkan ka soo yeeray Ra�iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii u danbeeyay Magaalada Muqdisha ay ku soo qul qulayeen Mas�uuliyiin fara badan oo u sharaxan Jagada Madaxweynaha Soomaaliya kuwaasoo iminka tiradoodu ay kor u dhaafayso illaa afartan Musharax oo jagadaas u taagan.
laba maalin ka hor ayay ahayd markii uu isaguna dalka soo gaaray mid ka mid ah Ra�iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya oo isaguna u sharaxan Jagadaas Maxamad Cabdulaahi Farmaajo.